IJW Library Sign Language | Uncedo KwiJW.ORG
IJW Library Sign Language yiapp esemthethweni yamaNgqina kaYehova. Idawunlowuda, igcine ize idlale iividiyo zejw.org.
Bukela iBhayibhile nezinye iincwadi eziziividiyo ngentetho yezandla. Zidawunlowudele kwifowuni yakho ukuze ukwazi ukuzibukela ungangenanga kwi-Intanethi. Uza kuyithanda imifanekiso emihle, indlela elula yokukhangela nendlela elula yokuyisebenzisa.
Indlela Elula Yokukhangela
Indawo yokuvula iBhayibhile ikuvumela ukuba ubukele iincwadi zeNguqulelo Yehlabathi Elitsha. Ungabukela ivesi nganye yeBhayibhile engekabi yonxalenye yeNguqulelo Yehlabathi Elitsha kodwa ephakathi kolunye uncwadi. Iphepha lokuqala libonisa olunye uncwadi neemuvi ezifumanekayo kwijw.org/xh.
Khawuleza Ukrwaqule IZibhalo Ezicatshulweyo
Ngoxa usabukele ividiyo, ungacofa indawo yokuvula iBhayibhile. Ividiyo iza kuma ngoxa usakhangela umbhalo. Buyela kwiphepha lokuqala ukuze uqhubeke nevidiyo.
Dawunlowuda Iividiyo Lula
Iividiyo ongekazidawunlowudi zivela zinombala ongabonakali kakuhle. Cofa kuloo vidiyo uyifunayo ukuze uzikhuphelele yona kwijw.org. Cofa indawo yokudawunlowuda zonke ukuze ufumane zonke iividiyo ezikhoyo. Ukuze ukhuphe ividiyo ongayifuniyo kwifowuni yakho, cofa kuyo uyicinezele.
Ubungakanani Bezinto Ozidawunlowudayo
Ungakhetha enokuba ufuna ukuzikhuphelela iividiyo ezinkulu (ezikumgangatho ophezulu) okanye ezincinane (ezikumgangatho ongezantsi). Ukuba ifowuni okanye isixhobo osisebenzisayo sinekhadi lokugcina inkcazelo, ungazikhethela enokuba ufuna ukuzigcina kwelo khadi kusini na iividiyo ozikhuphelayo.
Kulula Ukudlala Ividiyo
Sebenzisa ezi ndlela zilula zokuhambisa ividiyo:
Ukucofa ngeminwe emibini: Ukuyidlala okanye ukuyimisa ividiyo.
Ukuhambisa umnwe wakho uye ngasekhohlo: Ukudlulela phambili.
Ukuhambisa umnwe wakho uye ngasekunene: Ukubuyela umva.
Ukuhambisa umnwe wakho uye phezulu: Ukunyusa isantya sevidiyo. (Ayenzeki kwiAndroid.)
Ukuhambisa umnwe wakho uye ezantsi: Ukunciphisa isantya sevidiyo. (Ayenzeki kwiAndroid.)
Ukucofa ngomnwe omnye: Ukuveza okanye ukufihla amaqhosha okuyidlala ividiyo.
Ikuqokelelela zonke iividiyo ozidlala qho
Ikuvezela iividiyo okhe wazidlala
Ungafumana nezinye iilwimi zentetho yezandla
Iyasebenza nangeWindows 8
Ukuba uneengxaki neJW Library Sign Language, nceda uzalise uze uthumele le fomu.